Samsung Galaxy S6 Edge Plus အတွက် Pixel Rom, Deep Sleep နှင့်အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်သော Rom Androidsis
Francisco Ruiz | | ရွမ်, Samsung
ကျနော်တို့တစ် ဦး နှင့်အတူပြန်လာ Samsung Galaxy S6 Edge Plus မော်ဒယ် G928F အတွက် Romဤအခါသမယတွင်နှင့်ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင် terminal တွင်ပြုလုပ်သောကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်စမ်းသပ်မှုများအရဤ Rom ကိုကျွန်ုပ်အဖြစ်မှတ်ယူနိုင်သည် Deep Sleep သို့အကောင်းဆုံးသော Rom ဖြစ်သည်.
Samsung Galaxy S6 Edge Plus အတွက်ဒီ Rom အကြောင်းစိတ်မ ၀ င်စားခင်၊ ဦး စွာသတိပေးရပါမယ် တရားဝင် Samsung Nougat အပေါ်အခြေခံပြီး Rom, နောက်ဆုံး CQC7သော်လည်း Samsung အက်ပလီကေးရှင်းနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုအားလုံးနီးပါးကိုစနစ်မှဖယ်ရှားလိုက်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၊ အကယ်၍ သင်သည်ဤ Rom ကိုတပ်ဆင်ရန်ရွေးချယ်ပါကသင်၏ Samsung ဆိပ်ကမ်းများ၌စံသတ်မှတ်ထားသောအပလီကေးရှင်းတစ်ခုမျှသို့မဟုတ်လုံးဝနီးပါးမရှိနိုင်ကြောင်းသင်သိရလိမ့်မည်။ Touchwiz Launcher ကို Launcher Android အဖြစ်အကောင်အထည်ဖော်ရန်၎င်း၏နှစ်ခုစနစ်တွင်ပင်ဖယ်ရှားပစ်လိုက်သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် Google Pixel ၏ Pixel Launcher ။ ထို့ကြောင့် Rom ၏နာမကိုအမှီ !! ထို့ကြောင့်သင်သည်ဤစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်သန့်ရှင်းသော Rom ကိုသင်၏ Samsung Galaxy S6 Edge Plus မော်ဒယ် SM-G928F တွင် flash လုပ်လိုပါကပထမနေရာ၌ကျွန်ုပ်အားဤစာမူ၏အစတွင်သင်ထားခဲ့သည့်ဗီဒီယိုကိုကြည့်ရှုရန်နှင့်ဇာတိကိုကြည့်ရန်သင့်အားတိုက်တွန်းလိုသည်။ Samsung ၏အသုံးချပရိုဂရမ်များမှာ Rom တွင်ပါဝင်ပြီးအလွန်နည်းပါးသည်။
1 Pixel Rom တွင် Samsung အက်ပလီကေးရှင်းများပါဝင်သည်
2 Samsung Galaxy s6 edge Plus SM-G928F တွင် Pixel Rom ကို flash လုပ်ရန်လိုအပ်ချက်များ
3 Samsung Galaxy S6 Edge Plus တွင် Pixel Rom ကို Flashing လုပ်ရန်လိုအပ်သည့်ဖိုင်များ
4 Pixel Rom အတွက် Samsung Galaxy S6 Edge Plus တွင်မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်ညွှန်ကြားချက်များ
Pixel Rom တွင် Samsung အက်ပလီကေးရှင်းများပါဝင်သည်
အဘယ်ကြောင့်အကြောင်းပြချက်တစ်ခုမှာ ဤ Rom သည် Android ၏ Deep Sleep mode သို့ ၀ င်ရောက်လာသည်။ Samsung ၏မူလ application နှင့် ၀ န်ဆောင်မှုအများစုကိုဖယ်ရှားလိုက်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည် ၎င်းတို့သည်ဘက်ထရီသုံးစွဲမှုစာရင်းဇယားတွင်ဖော်ပြထားခြင်းမရှိသော်လည်း၎င်းတို့သည်အမြဲတမ်းတက်ကြွစွာရှိပြီး၊ terminal မှအရင်းအမြစ်များစွာကို စားသုံး၍ ၎င်းကိုကျော်ကြားသော Android ၏ Deep Sleep mode ထဲသို့ ၀ င်ရောက်ခြင်းကိုတားဆီးနိုင်သည်။
အကယ်၍ သင်သည် Samsung အက်ပလီကေးရှင်းများမပါဘဲမနေထိုင်နိူင်သူတစ် ဦး ဖြစ်လျှင် Touchwiz၊ နာရီနှင့်ပြက္ခဒိန်အက်ပလီကေးရှင်းသို့မဟုတ်မှတ်စုများအပြင်တေးဂီတ application သို့မဟုတ်အခြား Samsung ဝန်ဆောင်မှုများ, ကျိန်းသေသင်တို့အဘို့အကောင်းတစ် ဦး ရွေးချယ်မှုမဟုတ်ပါဘူး။
ဒီ Pixel Rom မှာ Samsung လို application တွေပါပါတယ် မူရင်းကင်မရာ၊ ဓာတ်ပုံပြခန်း၊ ဗွီဒီယိုအက်ပလီကေးရှင်း၊ Galaxy Apps အက်ပ်နှင့် S-Health အက်ပ်။ ဒါ့အပြင်ညမှာနာရီနှင့် Edge ဘေးဘားကိုဖွင့်ပြီးကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ Samsung Account မှာ ၀ င်ရောက်နိုင်ဖို့ကိုယ်ပိုင်ရွေးချယ်စရာတွေလည်းရှိပါတယ်။
သင်ဤ Rom ကိုကြိုးစားရန်စိတ်ဝင်စားပါကသင်သာလုပ်ရန်လိုအပ်လိမ့်မည်ဟုပြောပြီး အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအချက်များကိုလိုက်နာပါ:
Samsung Galaxy s6 edge Plus SM-G928F တွင် Pixel Rom ကို flash လုပ်ရန်လိုအပ်ချက်များ
တစ်ဦးရှိ Samsung Galaxy S6 Edge Plus မော်ဒယ်လ် SM-G928F
Samsung Galaxy S6 Edge Plus တွင် Pixel Rom ကို Flashing လုပ်ရန်လိုအပ်သည့်ဖိုင်များ
Samsung Galaxy S6 Edge Plus V4 အတွက် Rom Pixel Rom
လွဲချော်နေသောဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများကိုကျွန်ုပ်တို့သိရှိနိုင်ရန်အတွက် Rom နှင့်ပြင်ဆင်ချက်ကို download လုပ်ပါနှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် Rom ၏တောက်ပသောညွှန်ကြားချက်များကိုလိုက်နာသည်။
Pixel Rom အတွက် Samsung Galaxy S6 Edge Plus တွင်မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်ညွှန်ကြားချက်များ
ကျွန်ုပ်တို့သည်ပြုပြင်ထားသော TWRP ပြန်လည်ထူထောင်ရေးစနစ်သို့ဝင်ရောက်ပါလိမ့်မည် ဤစာမှတောက်ပသောညွှန်ကြားချက်များကိုကျွန်ုပ်တို့လိုက်နာသည် -
Wipe option ကိုသွားပြီး Rom နှင့် Fix မှဖိုင်များကို download လုပ်ထားသောလမ်းကြောင်း မှလွဲ၍ Wipes အားလုံးကိုရွေးချယ်ပါ။ ဒီအထူးသဖြင့်အမှု၌ ကျွန်ုပ်တို့သည် SD SD ၏ Wipe သို့မဟုတ် terminal ၏ internal memory ကိုမရွေးချယ်ပါ.
ကျနော်တို့ option ကိုသွားပါ Install ငါတို့ပထမ ဦး ဆုံးရွေးပါ ROM ZIP ကျနော်တို့အရေးယူအတည်ပြုရန်ဘားကိုလျှော။
System ကို restart မလုပ်ပဲ Install option သို့ပြန်သွားပါမည် y ယခုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်လွဲချော်သောဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်းများကိုလက်ခံရရှိရန်အတွက် Fix ကိုရွေးချယ်ပါ.
action ကိုအတည်ပြုရန်ဘားကိုနောက်တစ်ကြိမ်ရွှေ့ရသည် ကျနော်တို့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုလက်စသတ်သည်အထိကျနော်တို့စောင့်ပါ။
ရွေးစရာကိုနှိပ်ပါ Dalvik ကိုဖျက်ပြီး restart ခလုပ်ကိုနှိပ်ပြီး system ကို restart လုပ်ပါဤအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် TWRP နောက်ဆုံးပေါ်ဗားရှင်းတွင်ရှိလျှင်ဘားကိုရွှေ့ရန်မလိုအပ်ပါ၊ သို့မဟုတ်ပါက၎င်းသည် TWRP Manager ကိုတပ်ဆင်လိမ့်မည်။
Rom ကို restart လုပ်ပြီးတာနဲ့ငါတို့လုပ်လိမ့်မယ် ချိန်ညှိချက်များ / အပလီကေးရှင်းများ အချက်သုံးချက်ကိုနှိပ်ပြီး option ကိုနှိပ်ပါ ပုံမှန်အက်ပ်များ ကျနော်တို့ option ကိုဘယ်မှာမှစ ဖုန်းရွေးစရာကိုခေါ်ရန်အက်ပ်ကိုခေါ်ခြင်း.
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်ဤ Rom တွင် Root ခွင့်ပြုချက်ကိုရယူလိုပါက၎င်းသည်ကြိုတင်အမြစ်တွယ်ပြီးသားဖြစ်သည် Google Play စတိုးသို့ ဝင်၍ Magisk Manager အပလီကေးရှင်းကိုထည့်သွင်းပါ လိုအပ်လျှင် Recovery မှ Magisk ကိုမွမ်းမံပါ။
ပို့စ်ရဲ့အစမှာကျွန်တော်ထားခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုကိုကြည့်ပါ။ Rom နဲ့ Deep Sleep mode အပြင် Rom ရဲ့ flashing mode အကြောင်းများစွာရှင်းပြထားပါတယ်။ Build.prop ဖိုင်ကိုပြုပြင်ခြင်းအားဖြင့် terminal model ပြောင်းလဲခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုမည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ကိုလည်းကျွန်ုပ်ပြသခဲ့သည် သောစနစ်အတွင်း၌တည်ရှိ၏။ ထို့အပြင်ဤ Rom ကို flash လုပ်သောအခါကျွန်ုပ်တို့၏ terminal ၏ပုံစံကို SM-G928C သို့ပြောင်းလဲလိမ့်မည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » လဲ tutorial » ရွမ် » Samsung Galaxy S6 Edge Plus အတွက် Pixel Rom, Deep Sleep သို့အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်
ရာအူးလ် Flores placeholder ပုံရိပ် ဟုသူကပြောသည်
အလွန်ကောင်းမွန်သောထည့်ဝင်မှုနှင့်ကောင်းစွာရှင်းပြထားခြင်းဖြစ်သည်။ A300M အတွက်နဂါးငွေ့တန်းတစ်ခုအတွက် ROM ကိုဂုဏ်ယူပါတယ်။
Raul Flores သို့ပြန်သွားပါ
ROM က g928g model နဲ့အလုပ်လုပ်လားဆိုတာသင်သိလိမ့်မယ်
၎င်းသည်အလုပ်မလုပ်ပါကကျွန်ုပ်လုပ်ခဲ့သည်မှာ TTT rom (Trinidad and Tobago) ကိုဒေါင်းလုတ်ဆွဲခြင်းနှင့်ယခုအချိန်အထိအလွန်ကောင်းပါသည်၊ rom နှင့်ပတ်သက်သောအသေးစိတ်အချက်အလက်အချို့ကိုသာဖော်ပြထားသော်လည်း၎င်းတို့သည်အနည်းဆုံးဖြစ်သည်။
ROM ကိုယ်တိုင်ကအရမ်းကောင်းတယ်၊ ဘက်ထရီသိပ်မကုန်အောင်ငါ YouTube ပေါ်မှာ4နာရီကြာအောင်ဖန်သားပြင်ကိုပိတ်မထားဘဲအရမ်းကောင်းတယ်။ Netflix ကိုကြည့်ခြင်းကျွန်ုပ်သည်ရုပ်ရှင် ၂ လုံးကိုကျွန်ုပ်လက်ခံရရှိခဲ့သည်၊ ကျွန်ုပ်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများလက်ခံရရှိပြီးဘက်ထရီပါဝါရှိနေသေးသည်၊ ကျွန်ုပ်ကြိုးစားခဲ့သမျှမှာအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
ဒီ rom နဲ့ပတ်သတ်တဲ့နောက်ဆုံးသတင်းများရှိသလားဆိုတာသိချင်လို့လား၊ ဖုန်းခေါ်တာကိုမှတ်တမ်းတင်ဖို့၊ ထည့်သွင်းဖို့၊ ထည့်ဖို့နည်းလမ်းရှိလား။
ဒို Sanchez ဟုသူကပြောသည်
Eduardo Sanchez အားပြန်ပြောပါ
ဒီ 2019 မှာ odin ကအမှားရဲ့ stock rom ကို (hidden.img) ထဲမှာထည့်တော့မှာမဟုတ်ဘူး။
ငါ့မှာ galaxy s6 edge ပေါင်းပြီးတော့ဒီ terminal ကိုငါကြိုက်နေတုန်းပဲ၊ ဒီ 2019 ရဲ့နိုဝင်ဘာလလမှာဒီအသစ်ကို ၀ ယ်ခဲ့တယ်။
သင်၏ Android terminal ကို PC မှထိန်းချုပ်ရန်အကောင်းဆုံး application များ